Lego Star Warsဖြေ။ ။ နောက်ဆုံး Jedi အစုံက screen time နဲ့အဆင့်သတ်မှတ်တယ်
15 / 12 / 2017 14 / 12 / 2017 ဂရေဟမ် 1410 Views စာ0မှတ်ချက် 75176 ခုခံသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Pod, 75177 ပထမ ဦး ဆုံးအမိန့်အကြီးစားကင်းထောက် Walker က, 75179 Kylo Ren ရဲ့ TIE တိုက်လေယာဉ်, ၇၅၁၈၇ BB-75187, 75188 ခုခံဗုံးကြဲလေယာဉ်, 75189 ပထမ ဦး ဆုံးအမိန့်အကြီးစား Assault Walker က, 75190 ပထမ ဦး ဆုံးအမိန့်စတား ​​Destroyer, Lego, Lego Star Wars, Star Wars, Star Wars: နောက်ဆုံး Jedi
နှင့် Star Warsနေရာအနှံ့ရှိရုပ်ရှင်ရုံများမှနောက်ဆုံးဂျီဒီပ်ပရိသတ်များသည်ယခုရုပ်ရှင်ကားကိုကြည့်နိုင်သည် Lego အစုံလိုက်ပေါ်တွင်အခြေခံသည် - သူတို့ဘယ်လောက်မျက်နှာပြင်ရသည့်အချိန်ကိုရှာပါ
လုယူသောသူ, လုယူသောသူ, လုယူသောသူ။ ဒီအင်္ဂါရပ်နှင့်ပြည့်ဝ၏ Star Wars: နောက်ဆုံး Jedi လုယူသောသူ။ စာမဖတ်မီရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပါ။
Midicholrians သည်အလွန်အမင်းမုန်းတီးမှုများ (သို့) အလွန်အမင်းမုန်းတီးမှုဖြစ်သည် Star Wars prequel trilogy ပာကပြောပါတယ်။ ထိုအခြေခံတွင်တစ် ဦး ချင်းစီ၏မည်မျှကိုနာရီမှတ်ဖြင့်တိုင်းတာမည့်အစား Lego အစုံထဲမှာပေါ်လာတယ် Star Warsဖြေ။ ။ နောက်ဆုံးဂျေဒီပာကတော့ကြည့်ရတာတစ်ခုတည်းနဲ့တစ်ခုချင်းစီဘယ်လောက်ကြာကြာဘယ်လောက်ကြာတယ်ဆိုတာကိုကြမ်းတမ်းတဲ့မှတ်ဥာဏ်အပေါ်မှာအခြေခံပါတယ်။ ဒီတော့အကြောင်းကြားစာ, စာရင်းကိုလှိမ့်ကြကုန်အံ့ဖော်ပြခဲ့သည် - startအနည်းဆုံးမျက်နှာပြင်အချိန်နှင့်အတူအစုံနှင့်အတူ ing ...
#7 - 75177 ပထမ ဦး ဆုံးအမိန့်အကြီးစားကင်းထောက် Walker က
ဖြစ်ကောင်း 75177 ပထမ ဦး ဆုံးအမိန့်အကြီးစားကင်းထောက် Walker က ဖြတ်တောက်သောအခန်းကြမ်းပြင်ပေါ်တွင်ရှိနေသည်။ ၎င်းကို Captain Phasma ဖင်လန်နှင့်နှင်းဆီတို့ကိုကွပ်မျက်ရန်ရည်ရွယ်သည့်အလွန်ကြီးမားသည့်လေယာဉ်ရုံ၏နောက်ကွယ်တွင်ပြနိုင်သည် ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် First Order ရဲ့အာဆင်နယ်အသင်းမှာရှိတဲ့စိတ် ၀ င်စားစရာအကောင်းဆုံးဒီဇိုင်းကတော့တကယ်ကိုပျော်စရာကောင်းပါတယ် Lego အစုံ, ရုပ်ရှင်ပင်သိသာမဟုတ်ပါဘူး။ တောင်မှ 75100 ပထမ ဦး စွာအမိန့် Snowspeeder ဒီထက်ပိုမျက်နှာပြင်အချိန်ရှိခဲ့ပါတယ်။
#6 - 75188 ခုခံဗုံးကြဲလေယာဉ်
ဒီဇိုင်းကပိုပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးမူရင်းဒီဇိုင်းကမူမည်သည့်မျက်နှာပြင်အချိန်မဆိုယာဉ်သည်နည်းနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ The ခုခံဗုံးကြဲလေယာဉ်များ ရုပ်ရှင်အတွက်ဖိုး Dameron ရဲ့ဇာတ်ကောင်ကို arc sparks တဲ့စစ်တိုက်ရာတွင်သူရဲကောင်းဝင်ပေါက်ရ, ဒါပေမယ့်သူတို့အားလုံးဖျက်ဆီးခံရ - ရုပ်ရှင်သို့ဆယ်မိနစ်သာ။ အကောင်းဆုံးဒီဇိုင်းနှင့်ပုံစံသို့ပြောင်းလဲခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည် Lego ဗားရှင်းနေဆဲအလွန်အမင်းအကြံပြုလာသည်။
#5 - 75179 Kylo Ren ရဲ့ TIE တိတ်ဆိတ်
သူ၏စိတ်ပျက်စရာအချိန်လေးတစ်ခုတွင် Kylo Ren သည်သူ၏မိခင် General Leia ကိုသွားသတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သူ့အဖေကိုသတ်နေပေမဲ့သူ့အမေကိုသတ်မယ့်အစားသူကရပ်တန့်သွားတယ်။ သူ၏တောင်ပံများကအလုပ်ပြီးဆုံးသော်လည်းလေယာသည်နေထိုင်ခွင့်နှင့်အာကာသကိုဖြတ်သန်းပျံသန်းနိုင်သည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့် Resistance သင်္ဘောသို့ပြန်သွားနိုင်သည်။ ဒီ sequence ကိုစဉ်အတွင်း Kylo Ren သည်သူ၏၌တည်ရှိ၏ TIE Silencer ပါ, ဒါပေမယ့်တစ်ခုတည်းသော p ဖြစ်ပါတယ်art သူကအသုံးပြုသည့်အတွက်ရုပ်ရှင်၏။
#4 - 75189 ပထမ ဦး ဆုံးအမိန့်အကြီးစား Assault Walker က
ပရိသတ်တွေပထမ ဦး ဆုံးသစ်၏ဒီဇိုင်းကိုမြင်သောအခါ ပထမ ဦး စွာအမိန့်အကြီးစား Assault Walker က - သို့မဟုတ် AT-M6 - ရုပ်ရှင်ထဲတွင်ဘာလုပ်မည်ကိုများစွာပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဤရှေ့ခြေထောက်အသစ်များရှိသနည်း။ ဘာလဲ extra စွမ်းအားတစ်ခု AT-AT ခွင့်ပြုသည်ထက်ဤမျှလောက်ပိုကြီးတဲ့ဖြစ်ခြင်းသလဲ? ခုခံမှုကဘယ်လိုဖျက်ဆီးမလဲ။ ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် AT-M6 သည် p ကဲ့သို့ရပ်တည်သကဲ့သို့မည်သူမျှ ပို၍ ပညာရှိစေသည်art လိုင်းတစ်ခု၏။ ၎င်းတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည့်တစ်ခုတည်းသောပconflictိပက္ခမှာ Luke Skywalker ကိုပစ်ခတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အေးမြသောဒီဇိုင်းအတွက်အံ့အားသင့်စရာမျက်နှာပြင်အချိန်မရှိခြင်းနှင့်တူသည်။
#3 - 75176 ခုခံသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Pod
ဒီအစုံဟာအလွန်စျေးကြီးပေမယ့်ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာအခြေခံထားတဲ့မော်တော်ယာဉ်များထက်အများကြီးပိုပါတယ် Star Wars: နောက်ဆုံး Jedi ။ ဖင်လန်, နှင်းဆီနှင့် BB-8 အသုံးပြုမှု 75176 ခုခံသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Pod သူတို့ရဲ့ Canto Bight ကိုသွားပြီး Hacker တစ်ယောက်ရှာရမယ်။ နှစ်လုံးကကားကိုသဲသောင်ပြင်ပေါ်တွင်ပျက်ကျပြီးလုံးဝပျက်စီးသည်အထိဆက်ရှိနေသည်။
#2 - 75190 ပထမ ဦး ဆုံးအမိန့်စတား ​​Destroyer
ကွဲပြားခြားနားတဲ့တစည်းရှိပါတယ် ပထမ ဦး စွာအမိန့်စတားဖျက်သင်္ဘော, သူတို့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာအများကြီးရှိပါတယ်။ ရုပ်ရှင်၏ဇာတ်လမ်းမှာ First Order စင်းမှသည်တင့်ကားများကိုဖြည်းဖြည်းချင်းလိုက်ဖမ်းနေခြင်းကြောင့်ဤအထင်ကရသင်္ဘောများသည်အမှန်တကယ်ပင် ၀ င်ရောက်လာသည်။ Lego အပေါ်အခြေခံပြီးမော်တော်ယာဉ်များ Star Warsဖြေ။ ။ နောက်ဆုံးဂျီဒီဇာတ်ကားကအချိန်တော်တော်များများရတယ်။
#1 ၇၅၁၈၇ BB-75187
ယင်းကိုတွေ့ရှိရန်မှာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ ၇၅၁၈၇ BB-75187 အဆိုပါဖြစ်ပါသည် Lego ဇာတ်ကောင်နောက်ဆက်တွဲ trilogy ပာ၏အရေးပါသောကြောင့်, အများဆုံးမျက်နှာပြင်အချိန်နှင့်အတူ set ။ Droid ဘောလုံးဘောလုံးသည်သူရဲကောင်းများနှင့်ပတ်သက်သည့်လူသားဇာတ်ကောင်များကဲ့သို့ပါ ၀ င်ပတ်သက်မှုရှိသည်။ ၎င်းသည်နည်းဗျူဟာအရမဟာမိတ်ဖွဲ့သည်ဖြစ်စေ၊ AT-ST မောင်းနှင်သည်ဖြစ်စေ၊ ထောင်အစောင့်များကိုတိုက်ခိုက်သည်ဖြစ်စေ၊
Star Warsဖြေ။ ။ နောက်ဆုံးဂျဲဒီကရုပ်ရှင်ရုံမှာရှိတယ်။ Lego ရုပ်ရှင်အပေါ်အခြေခံပြီးအစုံကနေရရှိနိုင်ပါသည် shop.LEGO.com.
← နယူး Star Wars တရားဝင်တရားဝင် set set ကိုပုံရိပ်တွေ
ထိုနေ့၏အုတ်ပုံ: Imperial အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ →